Ukulawulwa Kwekhwalithi - Wuling (Fuzhou) Biotechnology Co., Ltd.
E-Wuling, uthishanhloko wokuqala kuyo yonke imikhiqizo esiyikhiqizayo ukuthi yenziwa kuphela ngesithelo somzimba we-Mushroom njengoba lokhu kuyizithako eziningi ezisebenzayo.
Kuwo wonke amaphuzu ekukhiqizeni siqapha umkhiqizo wethu ukuze uthole amaleveli ezithako ezisebenzayo ezifanele ukuze ube nesisekelo esingaguquki nesiphezulu sempahla noma umkhiqizo osuphelile ovela kithi.
Siwukuphela kwemboni emhlabeni esebenzisa indlela ye-Juncao enelungelo lobunikazi ukuze kutshalwe i-Reishi, engagcini nje ngokuzwakala kahle ngokwezemvelo kodwa futhi enezithako ezisebenzayo kuneReishi evame ukutshalwa.
Siqinisekisiwe nge-ISO 22000 futhi singahlinzeka ngemibiko yokuhlola ye-SGS njengoba kudingeka.
Wonke ama-Mushroom oda esiwakhiqizayo ahlolelwa izibulala-zinambuzane, izinsimbi ezisindayo nezingxenye ezisebenzayo kanye nokuqukethwe kwamagciwane futhi kufanele ahambisane nezindinganiso ezigunyaziwe zikahulumeni ukuze sikwazi ukuthumela ngomkhumbi.
Kuzo zonke izinyathelo ukusuka epulazini ukuya emkhiqizweni oqediwe sithatha ikhwalithi, ukuphepha kanye nokungaguquguquki sikuyise kumazinga aphezulu ukuze uqiniseke ukuthi uthola okungcono kakhulu kubasebenzisi bakho bokugcina.
Izinga lethu livela ekukhethweni okunemininingwane kanye namazinga aqinile wezinto ezingavuthiwe esizisebenzisayo kanye nezinqubo ezihamba phambili ekulimeni.
Isizinda sethu sokutshala kwemvelo sitholakala ngaphansi kweNtaba iWuyi eseningizimu, ehlanganisa indawo ecishe ibe ngu-800 mu.I-Wuyi Mountain ingenye yezindawo zokulondoloza imvelo ezibalulekile zase-China, lapho umoya ozungezile uhlanzekile futhi ungenakho ukungcola okwenziwe futhi ifaneleka kakhulu ekukhuleni kwamakhowe okwelapha.Sisebenzisa izinhlobo zekhwalithi ephezulu futhi sikhetha isiko elingangcolisi futhi silandela ngokuqinile imithetho yokutshala ye-GAP yomhlaba wonke kanye namazinga e-organic yase-US/EU ngesikhathi sokukhula kwamakhowe.Asisebenzisi noma yimaphi ama-fertilizer amakhemikhali noma izibulala-zinambuzane futhi sinezidingo eziqinile kakhulu ngekhwalithi yamanzi ukuze siqinisekise amakhowe ekhwalithi ephezulu ngaphandle kwezibulala-zinambuzane noma izinsalela zensimbi enzima.
Umoya wobungcweti uqondisa inqubo yokukhipha amakhowe.
Eminyakeni engu-17 edlule, ukuze siphishekele imikhiqizo engcono, siye sathuthukisa ngokuqhubekayo umugqa womkhiqizo futhi sathuthukisa inqubo yezobuchwepheshe.Ifekthri yethu ejulile yokucubungula ihlanganisa indawo ecishe ibe ngamamitha-skwele angu-20,000, futhi inochungechunge lwezindawo zokusebenzela zokomisa nokugaya amakhowe, imishini yethu yokucubungula nokukhipha, amaworkshop okucubungula ukudla konke kuhlangabezana namazinga e-ISO22000 futhi ahambisana nezindinganiso ze-GMP.Singahlinzeka amakhasimende ngamanani amakhulu amakhowe omisiwe aphilayo navamile, impushana yamakhowe ewuketshezi ehlukahlukene, singakhiqiza i-polysaccharides yamakhowe kanye ne-beta glucan enohlu lwesithako esisebenzayo esingu-10% kuya ku-95%, kuye ngezidingo zakho, singakunikeza futhi. imikhiqizo yokuqukethwe okukodwa enokuqukethwe okuphezulu kwe-cordycepin (isithako esisebenzayo ku-cordycept) ne-Hericium (isithako esisebenzayo ku-Lion's mane) njll.